Oomatshini bokucoca ulwelo factory - China oomatshini oomatshini abenzi, abaxhasi
Umatshini wokuPakisha weThermoforming
Umshini weDesktop (Inflate) Umatshini wokuPakisha
Uhlobo lweTheyibhile Umshini wokuPakisha
Nkqo yangaphandle Umshini Packaging Machine
Umshini wokuPakisha iKhabhinethi
Cinezela oomatshini bokupakisha
2021 umatshini Ukupakisha Noodle Instant
Thermoforming oomatshini bokupakisha ulusu
Umshini wokupakisha ulusu ubizwa ngokuba ngoomatshini bokupakisha ulusu nge-thermoform. Yenza itreyi eqinileyo emva kokufudumeza, emva koko igubungele ifilimu ephezulu kunye netreyi engezantsi ngaphandle komthungo emva komshini kunye nobushushu. Okokugqibela, iphakheji ekulungeleyo iya kuphuma emva kokusikwa.
Thermoforming ziqinile Packaging Machine
Umatshini wokupakisha ojikeleze ngokuzenzekelayo ubizwa ngokuba yiThermoforming oomatshini bokupakisha ifilimu. Yolula iphepha leplastikhi kwitreyi emveni kokufudumeza, emva koko itshixe igesi, emva koko itywinile itreyi ngesigqubuthelo esingaphezulu. Okokugqibela, iya kukhupha iphakheji nganye emva kokusikwa.
Yolula ishidi kwiphakheji engezantsi eguqukayo emva kokufudumeza, emva koko ikhuphe kwaye itywinele iphakheji engezantsi ngesigqubuthelo esingaphezulu. Okokugqibela, iya kuphuma yonke ipakethe nganye emva kokusika.